Android no tena mihidy indrindra amin'ireo rafitra misokatra, araka ny fanadihadiana nataon'ny VisionMobile | Androidsis
Android no tena mihidy indrindra amin'ireo rafitra misokatra, araka ny fanadihadiana nataon'ny VisionMobile
Fabio | | Tutorials, Android Version
Tamin'ny fanombohan'ny Android, Google dia nampanantena fa ho tetikasa loharano misokatra izy io, izay matetika no misy an'ity karazana sehatra ity, ny vondrom-piarahamonin'ny mpampiasa dia hanampy amin'ny fanatsarana rehefa mandeha ny fotoana.
Orinasa mpikaroka momba ny tsena antsoina hoe VisionMobile dia nanapa-kevitra ny handinika lalina ity fampanantenany ity, amin'ny fampitahana ny rafitra miasa finday an'i Google amin'ireo tetikasa loharano misokatra lehibe valo malaza, ary namoaka didy fa ny Android no mihidy indrindra amin'izy rehetra.
Ny orinasa dia nanendry isa isaky ny tetikasa araka ny mason-tsivana efa napetraka, toy ny karazana fahazoan-dàlana nampiasaina, ny fahazoana miditra sy ny fahazoana ireo kaody loharano vao haingana indrindra, ary ny fahafahan'ny mpamorona mitaona ny tetikasa, ankoatry ny zavatra hafa.
Ny tetik'asa voadinika dia WebKit, Symbian (alohan'ny hiakatohany), Qt, MeeGo, Firefox, Eclipse, Linux kernel ary Android. Ary taorian'ny nanaovany ny kaonty rehetra, nanapaka ny VisionMobile fa ny rafitra fiasa finday ao Google dia manana isa ambany indrindra, miaraka amin'ny 23%.
Ny antony lehibe notononin'ny VisionMobile ho an'ny isa ambany amin'ny rafitra dia ny maodely fizarana fandraisana anjara mikatona ary ny antony mahatonga ny Google hanao ny fanapahan-kevitry ny Android rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Android Version » Android no tena mihidy indrindra amin'ireo rafitra misokatra, araka ny fanadihadiana nataon'ny VisionMobile
Marina izany toy ny tempoly. Eny ary, mamoaka ny kaody izy ireo, saingy mazava fa ny alehan'ny fampandrosoana dia izy ireo ihany no manapa-kevitra, ary izy ireo irery ihany. Tsy tadidiko ny nahenoako olona nandray anjara tamin'ny kaody Android, tena ...
Land-of-Mordor dia hoy izy:
"... Orinasa mpikaroka momba ny tsena antsoina hoe VisionMobile nanapa-kevitra ny handinika lalina io fampanantenany io ..."
Raha atao teny hafa, dia nitsangana ny filohan'ity orinasa ity indray andro ary nilaza fa "hametraka ny loharanon'ny orinasako hanadihady ny fisokafan'ny Android" aho, ary koa ireo izay tsy maniry izany. Tsy maintsy manontany tena isika hoe iza no nanendry fandinihana toy izany, satria mazàna dia olona iray no mahazo tombony amin'izany na iza no mahazo tombony amin'ilay hoe ratsy kokoa ilay mivoaka.
Valiny ho an'i Land-of-Mordor
Pabloandroid dia hoy izy:
Misy aminareo ve afaka nandray anjara tamin'ny fampandrosoana ny meego? Farafaharatsiny tsy izaho, ary tsy ho faniriana izany satria tiako ny kely hitako taminy.
Andao hatrehana izany, ao amin'ny orinasa toy ny telefaona finday, mihozongozona ny fototry ny rindrambaiko maimaim-poana, ary ny zava-dehibe dia ny tapitrisa fa tsy ny soatoavina.
Valiny tamin'i Pabloandroid
Eny, araka io, nanome olona telo heny mihoatra ny Android izy tao Meego, noho izany tsy mendrika ny mampihatra ny "total, in can can". Angamba Google dia tsy maintsy manao fitsikerana kely ny tenany ary manokatra kely kokoa, azo antoka, miaraka amin'ny tobin'ny mpampiasa ananany, dia mety hahazo tombony be avy amin'ny fandraisana anjaran'ny fiarahamonina.
deabru dia hoy izy:
Ny fampandrosoana dia handeha amin'ny toerana tadiavin'ny programmer (na ny olona mandoa azy ireo).
Na iza na iza amin'ny fiarahamonina dia tsy afaka manapa-kevitra ny amin'izay lalana tokony harahina, tsy maintsy asehon'izy ireo fa miabo ny heviny, ho soa ho an'ny tetikasa.
Mamaly an'i deabru
j-jux dia hoy izy:
Rehefa mampiasa ny asan'ny hafa ny olona iray hamoronana tantara dia matetika no heverina ho fomba tsara ny mametraka rohy farafaharatsiny.
Mamaly an'i j-jux
Emacore dia hoy izy:
Ny antony iray manontolo, ny lesoka dia tsy ny Google ihany, fa ny mpanamboatra azy koa (jereo ny bootloader mihidy), ny fanaparitahana ary ny fanavakavahana. Manantena aho fa marina fa miaraka amin'ny Android Ice Cream Sandwich ny finday rehetra dia "miray hina" ary hanjavona (mety manonofy)
Mamaly an'i Emacore
Raha tsy misy PowerPoin, ahoana ny…? andao jerena ireo mailaka
Sixaxis Controller: Milalaova amin'ny fifehezana tsy misy tariby amin'ny Android-nao